तपाँइको बच्चाले हातगोडा दुख्यो भन्छ ? कारण यस्तो हुनसक्छ - Everest Dainik - News from Nepal
तपाँइको बच्चाले हातगोडा दुख्यो भन्छ ? कारण यस्तो हुनसक्छ
काठमाडौं, साउन १० । शारीरिक विकासका क्रममा कहिलेकाहीँ बच्चाको हातगोडा दुख्ने समस्या आउन सक्छ । यस्तो समस्यालाई मेडिकलमा ‘ग्रोइङ पेन’ (बढ्दो उमेरको समस्या) भनिन्छ । बच्चामा किन यस खालको समस्या देखिन्छ त ?
बच्चामा आवश्यक क्याल्सियमको कमीले यस्तो समस्या निम्तिने वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा।डा। गणेश गुरुङले बताए । ‘बच्चा बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई आवश्यक क्याल्सियमको कमीले जोर्नी तथा हड्डी दुख्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘चुलबुले तथा खेल्ने बच्चाहरूलाई क्याल्सियम बढी चाहिन्छ ।’
याे पनि पढ्नुस दैलेखमा क्वारेन्टाइनमै जन्मियो बच्चा !
बच्चा उमेरअनुसार बढ्न क्याल्सियम अपरिहार्य छ । क्याल्सियम कम हुन नदिन खानपानमा विशेष ख्याल पुर्याउनुपर्छ । हरेक दिन सामान्य मालिस गर्दा पनि बच्चाको दुखाइमा धेरै राहत मिल्छ । कतिपय बच्चामा जोर्नी दुखाइका कारण बाथरोग पनि हुनसक्छ । कतिपय बालबालिकामा बाथको समस्या भने पछि गएर आफैँ ठीक हुन्छ । तर, कतिपयको भने पछिसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताउँछन् डा. गुरुङ ।
याे पनि पढ्नुस बच्चाकाे माेटाेपना घटाउन बाआमाकाे विशेष भूमिका, यी हुन् सजिलाे टिप्स
डेरी उत्पादन दूध, दही, चिजमा क्याल्सियम सबैभन्दा राम्रो पाइन्छ । सुन्तलाको जुस, चकलेट मिल्क, चाइनिज बन्दागोभी, चिप्ले भिन्डी, ब्रोकाउली, बदाम, माछालगायतमा पनि क्याल्सियमको मात्रा धेरै हुन्छ । नेपाली हेल्थबाट साभार
बच्चाको उमेरअनुसार यस्ता खानामा जोड दिनुपर्छ । उमेरअनुसार बच्चालाई प्रतिदिन यति मात्रामा क्याल्सियम चाहिन्छः
याे पनि पढ्नुस ३० वर्षीया महिलाले जन्माइन् ५ किलोको बच्चा
कति बर्षको बच्चालाई कति क्याल्सियमः
ट्याग्स: बच्चा, हातगोडा